संस्थाको विकासमा सबै नेपाली समुदाय एकजुट हुनुपर्छ: निर्वाचन समिति संयोजक जोशी
नुवाकोट समाज दक्षिण कोरियाद्वारा एम्बुलेन्स हस्तान्तरण
Naya Dainiki Author १५ घण्टा पहिले
प्रवासी नेपालीहरूले मतदान गर्न पाउनुपर्ने अधिकारको लागि प्रवासी नेपाली मञ्चले ज्ञापनपत्र बुझायो
एनआरएनए:उच्चस्तरीय समितिले फेब्रुअरी ५ भित्र डेलिगेट्स सूची तयार गर्ने
संस्थाको विकासमा सबै नेपाली समुदाय एकजुट हुनुपर्छ: निर्वाचन समिति संयोजक जोशी विधान अनुसार काम गरेका छौं ,प्रचार प्रसार अभाव भयो:निर्वाचन प्रवक्ता शेर्पा
Naya Dainiki Author आईतबार, साउन ३, २०७८
एनआरएनए कोरियाको निर्वाचन प्रकृयामा मुख्य पदहरुकै दावेदारी रद्ध भएपछि नयाँ वहस शुरु भएको छ । शनिवार एन आर एन ए कोरियाले अन्तराष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि निर्वाचन सम्बन्धमा एक कार्यक्रम विच जानकारी गराएर अहिले सम्मको प्रकृया बारे प्रश्ट पार्ने कोशिस गरेको छ ।
अहिले सामाजिक संजाल भरि एन आर एन कोरियाको चर्चा परिचर्चा चलिरहेको छ । यसमा सबैको आफ्नो आफनोे व्यक्तिगत विचार हुनेनै भयो । निर्वाचन समितिले विधान सम्मत काम गरिरहेको दावी गरिरहदा सामाजिक संजाल मार्फत धेरै प्रश्नहरु उठिरहेका छन । धेरैले अहिलेको अवस्थामा एन आर एन ए कोरिया कामै नलाग्ने गरि बदनाम भयो भनिरहदा अहिले सम्मको गतिविधिको बारेमा चिरफार गर्ने कोशिस गरेका छु ।
अहिले अध्यक्ष , बरिष्ठ उपाध्यक्ष , आईसिसि सदस्य लगायत पदहरुमा निर्विरोध हुनेगरि नामावली प्रकाशन हुदा यस अघि रद्ध भएको मुख्य पदहरु उपाध्यक्ष,महासचिव र कोषाध्यक्षमा पुन उम्मेदवारी आव्हान गरिएको छ ।
एकाथरि विचार हेर्दा अहिले एन एन आर एन कोरियाको बारेमा बोल्नु पर्ने कुनै कारण छैन । तर अहिलेको अवस्था एकै पटक आएको भने होईन यसको लागि विगत देखिकै पृष्ठभूमिको वृहत अध्ययन गर्नु पर्ने हुन्छ । अहिले निर्वाचन समितिले मुख्य पदहरुका उम्मेदवारहरुको उम्मेदवारी खारेज गरेपछि विवाद बढदै गएको छ । निर्वाचन समितिका सदस्यले खास कारण उम्मेदवारलाई जानकारी गराईसकेको र प्रमाण सहित उम्मेदवारलाई आन्तरिक रुपमै जानकारी गराएको बताउदै गर्दा उम्मेदवारहरुले भने विना कारण नै आफूहरुमाथि गलत मनासाय राखेर उम्मेदवारी खारेज गरेको दावी गरेका छन । यस विषयमा निर्वाचन समितिले सम्बन्धित व्यक्तिलाई पठाउने भनेको खास कारण र बनाएको मापदण्ड संग मिलाउदा भविष्यमा मात्र प्रष्ट हुन सक्छ ।
भएको चाही के हो ?
एन आर एन ए कोरियाले निर्वाचन सम्बन्धि प्रकृया शुरु भए देखि नै विभिन्न विषयहरु मार्फत कार्यसमितिको विरोध शुरु भयो । यस पटक स्मार्ट कार्ड प्रणाली लागू गर्दा निर्वाचनको सम्पूर्ण प्रकृया फरक हुन पुग्यो र यसले यथास्थितीमै चल्ने र संस्थालाई मनमरी गर्र्नेहरुलाई रोकि दिदा समस्या उचाल्ने प्रयास भएको एकथरिको दावी छ । तर उम्मेदवारहरुको माग हेर्दा उनीहरुलाई प्रष्ट संग कारण दिन नसकेको हो कि भन्ने पनि देखिन्छ ।
सदस्यता सम्बन्धि विवाद
शुरुवाती रुपमा एन आर एन कोरियाले सदस्यता सम्बन्धि विषय अगाडि ल्याए देखिनै प्रश्न उठेको हो । पहिलेको जस्तो एन एन आर ए कोरियाले निर्वाचनको बेलमा सदस्यता बनाउने प्रथा रोक्ने भन्दै आफ्नो कार्यकाल शुरुवात संगै सदस्यता वितरण शुरु गरयो । जव सदस्यता वितरणको एक महिना बाकी रहयो त्यो समयमा एन आर एन कोरियाले एक महिना बाकी भनेर सूचना निकाले पछि कोरियाका विभिन्न व्यक्तिहरुले सदस्यता बारेमा थाहा पाए । जव एक साता मात्र बाकी हुदा धेरै व्यक्तिहरुले सदस्यता वितरणको समय बढाउन माग गरे । केन्द्रको तोकिएको दिन भन्दा समय दिन नसक्ने भनेर सदस्यता वितरण बन्द भए पछि सदस्यता वितरणमा सबैले सहभागि नगराएको भनेर विरोध शुरु भयो । तर एन आर एन ए कोरियाले केन्द्रले दिएको समय सिमा सम्म आफूहरुले सदस्यता वितरण गरेको दावी गरेको छ ।
विधार्थीहरु सदस्य र उम्मेदवार बन्नै नपाउने
अहिले सदस्यता सम्बन्धि मुख्य विषय विधार्थी संग जोडिएको छ । विधार्थी भिसामा भएकाहरुलाई उम्मेदवार बन्न नपाउने भनेर रोकिएपछि उनीहरुको सदस्यता सम्बन्धि प्रश्न पनि उठेको छ । हुनत २०१३ मै नेपालमा एन आर एन ले आधिकारिक दर्ता गर्दा अन्तराष्ट्रिय सम्मेलनबाटै विधार्थीलाई सदस्य हुन नपाउने भनेको छ । सरकारले एन आर एन ए को परिभाषामै विधार्थीलाई एन आर एन नमानेपछि आईसिसिले सो सर्त स्वीकारेर संस्था दर्ता गरेको हो । कोरियाको हकमा भने एन आर एन ए को मुख्य विधानलाई पालना भएको पाईएन । विगतमा उम्मेदवारहरुले विधार्थीहरुलाई भोट बैंकको रुपमा प्रयोग गरेर विधानको ठाडो उल्लघन गरे । त्यस माथि एक पटकलाई पदिय जिम्मेवारीमा बसेकालाई अवसर दिने भने पनि विधार्थीहरुलाई विगतका कार्यसमितिले विधान विपरित प्रयोग गरिरहे । पटक पटक विवादित भएपछि एन आर एन ए कोरियाको २०१९ को विधान संसोधन समितिले विधार्थीले सदस्यता नपाउने प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ । तर विगतका गलत नजिरको प्रयोग गर्दै अझै पनि विधार्थीहरुलाई उम्मेदवार बनाउनु पर्ने विषय उठेको छ ।
यसो त विधार्थीहरुको आधिकारिक संस्था सोनसिकले पनि आफ्ना सदस्यहरुको गलत प्रयोग नहोस भन्नको लागि सचेत गराउन जरुरी छ । केन्द्रीय विधानले विधार्थीलाई सदस्य नमानेको अवस्थामा जवरजस्ती कोरियामा सदस्यता वितरण हुने गर्दा त्यसले कार्यसमितिकै वैधतामा प्रश्न उठने गरेको छ ।
विधान र आईसिसिको निर्देशनअनुसार काम गर्दै छौं ः युगल किशोर शेर्पा
एन आर एन कोरियाको आठौं महाधिवेशन निर्वाचन समितिका प्रवक्ता रहेका आदिवासी जनजाती महासंघ दक्षिण कोरियाका अध्यक्ष युगल किशोर शेर्पाले आफूहरुले भोटिङ नगर्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको प्रष्ट पारेका छन । आफूहरुले विधानअनुसार काम गरेको तर त्यसलाई प्रचार प्रसार गर्न भने केही कमि भएको शेर्पाले बताएका छन । एन आर एन ए कोरियाले आज जुम मार्फत गरेको कार्यक्रमविच सोधिएको प्रश्नको जवाफ दिदैं शेर्पाले आफूहरुले विनाकारण उम्मेदवारी खारेज गरेको भन्ने दावी गलत भएको बताएका छन । अहिले एन आर एन ए स्मार्ट कार्ड मार्फत निर्वाचन हुनु,ई भोटिङबारे प्रष्ट पार्न बाँकी रहनु, उम्मेदवारले फाराम भर्दा प्रतिज्ञा पत्र भर्न लगाईको र कोरियाको विधान र आईसिसिको निर्देशन अनुसार काम गर्दा धेरै साथीहरुको उम्मेदवारीको साथ सपोर्टिङ डकुमेन्ट समेत नपुग्दा केही साथीहरुको उम्मेदवारी रद्ध गर्न बाध्य भएको शेर्पाको दावी छ । अहिलेको विधानले विधार्थीलाई एन आर एन ए मान्दैन उनीहरुले सोनसिक जस्तो संस्थामा काम गर्ने पर्ने शेर्पाको सुझाव छ ।
यसै विच शेर्पाले फोनिज कोरियाको एक अन्तर्वाताको क्रममा समेत उम्मेदवारहरुले आवश्यक डकुमेन्ट पुरा गर्न नसक्दा पद खाली हुन पुगेको बताएका थिए । “हामीले एक मापदण्ड तयार गरिसकेका छौं,उम्मेदवारलाई भोली योग्य देखाउने कारण नहुदा रद्ध गर्न बाध्य भयौं ”शेर्पाले भने । आईसिसिको संसोधित विधान र निर्देशन पालना गरेर काम गर्दा कोरियाको मात्र विधान हेर्ने साथीहरुमा केही अन्योल भएको भन्दै उनले आईसिसिको संसोधित विधान र अहिलेको मापदण्डको ८(च)मा “कुनै पनि उम्मेदवारले
राजनैतिक , जातिय , धार्मिकसंस्थाको कार्यकारी पदाधिकारी सदस्य पद धारण गरेको भए सो पद त्याग गरेको प्रमाण(राजीनामा स्वीकृती)मनोनयन फारामको साथ पेश गर्नु पर्नेछ ”रहेको बताएका छन ।
यसैगरि उनले सबै पदमा रहेको व्यवस्था अनुसार आवश्यक छानविन गरेर मात्र उम्मेदवारी रद्ध गरिएको दावी गरेका छन ।
तर यस यघि कोरियाको संसोधित विधानले विधार्थीलाई सदस्यता नदिने भनेर प्रष्ट लेखेको भएपनि अझै सम्म सो कार्यन्वयन हुन नसक्नु यस अघिको कार्यसमितिको गल्ती रहेको पनि शेर्पाको भनाई छ । अझ माथिको विषयमा भने उम्मेदवार विजयी भएको ४५ दिन भित्र राजीनामा दिए हुन्छ भन्ने विधानको विषय अझै संसोधन भएको छैन । केन्द्र संगको सल्लाह कोरियाका जिम्मेवार पदाधिकारी र निर्वाचन समितिको संयुक्त छलफलले उपाध्यक्षहरु,महासचिव र कोषाध्यक्ष पदमा पुःन उम्मेदवारी आव्हान गरेको पनि शेर्पाले जानकारी दिए ।
निर्वाचन प्रकृया सफल गराउन कोरियाबासी नेपालीमा आव्हान ः ज्ञानेन्द्र प्रसाद जोशी निर्वाचन संयोजक एन आर एन ए कोरिया
अहिलेको निर्वाचन प्रकृयामा धेरै मुख्य पदहरु खारेज हुनु आफ्नो कुनै व्यक्तिगत सोच भन्दा पनि विधानको व्यवस्था भएको निर्वाचन संयोजक ज्ञानेन्द्र जोशीले बताएका छन । यस विषयमा धेरै कुरा उठेपनि विधान अनुसार काम गर्नु आफ्नो दायित्व भएको जोशीले बताए । संस्थालाई विधान अनुसार अगाडि बढाउने असल नियतको साथ यस्तो कदम चालेको भएपनि कतिपय व्यक्तिहरुले यसलाई गलत अर्थ लगाएको जोशीले गुनासो गरे । “विगतमा विधान मिचेर गल्ती गरियो होला तर हामी त्यस्तो गल्ती दोहोर्याउन चाहदैनौं ”
जोशीले भने । २ कार्यकाल अघि देखि नै एक पटकलाई मात्र विधार्थीलाई छोडिदिउ भनेको स्मरण गर्दै जोशीले भने गलत नजिर सधैं राखेर हामी विधान मिच्न सक्दैनौ । आईटिका प्रोफेसर समेत रहेका जोशीले शुरुमा हेर्दा केही कठोर देखिएपनि दिर्घकालमा यसले संस्थालाई नै फाईदा पुग्ने हुदा निर्वाचन प्रकृया सफल पार्न कोरियावासी सम्पूर्ण नेपालीमा सहयोगको आव्हान गरेका छन ।
निष्पक्ष र विधानअनुसार काम गर्दा भ्रम फैलाउने काम भयो ः निर्वाचन समिति सदस्य दिनेश हिराचन
कोरियामा लामो समयको बसाई र एन आर एन कोरियाको पूर्व पदाधिकारी समेत रहेका वर्तमान निवाचन समिति सदस्य तथा व्यवसायी दिनेश हिराचनले आफूहरुले निष्पक्ष र विधान अनुसार काम गर्दा केही भ्रम फैलाउने काम भएको बताउनु भएको छ । विधान अनुसार तोकिएको पदमा योग्यता र तोकिएको डकुमेन्ट मात्र छुटेको साथीहरुले आफूहरुलाई एन आर एन नै नमानेको भनेर वुझ्नु नै गलत भएको हिराचानको भनाई छ । विगतमा एकै दिनमा होहल्लाको विचमा केही नसुनी एकै पटक काम हुने गरेको तर अहिले लामो प्रकृयागत रुपमा र नियमानुसार गर्न खोज्दा केही असहज सोचिएको हुन सक्ने उनको विचार छ । हिजो योगदान नै गरेको साथीहरु छुटनु हुदा केही नराम्रो लागे पनि भविष्यमा यसले संस्थाको हित गर्ने हिराचनको दावी छ । सबै प्रकृया पुरा गरेर आएकाहरुलाई आफूहरुले कुनै भेदभाव नगर्ने भन्दै उनले बाकी पदहरुमा समेत आवश्यक आधार पेश गरेर आउन अनुरोध गरे । समाजमा जिम्मेवार व्यक्तिहरुले नै सत्य तथ्य नबुझि सामाजिक संजाल मार्फत समाज धमिल्याउन लाग्नु दुखद रहेको विचार राखेका हिराचनले एन आर एन ए लाई सफल बनाउन सामाजिक व्यक्तित्व जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताउनुभयो ।
सदस्यता वितरणमा कुनै गलत भएको छैन ः एन आर एन ए अध्यक्ष यज्ञराज सुवेदी
एन आर एन ए कोरियाका अध्यक्ष यज्ञराज सुवेदीले एन आर एन ए कोरियाले सदस्यता वितरणमा कुनै गलत नगरेको दावी गरेका छन । एक कार्यक्रम विच सुवेदीले लामो समयदेखि आफूहरुले सदस्यता आव्हान गरेको र सके सम्म सबैलाई सहभागि गराउन प्रयत्व गरेको दावी गरेका छन । केन्द्रले स्मार्ट कार्ड मार्फत नै सदस्यता फाराम भराएकाले पुरानालाई सोझै नविकरण गर्न नसकिएको सुवेदीको दावी छ । अरुहरुले दावी गरे जस्तो सदस्यता वितरणमा कुनै मनपरी भएको छैन । केही सिस्टमले असहज भएको स्वीकार गर्दै सुवेदीले जानाजान आवश्यक डकुमेन्ट नदिनेको सदस्यता बदर गर्न भने आफूहरु वाध्य भएको बताएका छन ।
आफ्नो कार्यकालमा संस्था दर्ता देखि सामाजिक कार्यलाई स्थापित गर्न धेरै काम भएको त्यसलाई प्रचार प्रसार मात्र नभएको सुवेदीले दावी गर्दै भने “भविष्यमा हाम्रो कामको मुल्यांकन हुनेमा विश्वस्त छौं ”।
एन आर एन कोरिया माथि आई सि सि मा आवेदन
वर्तमान कार्यसमितिले गरेको काम कार्वाहीको विषयमा एन आर एन ए आईसिसि यमा दावि विरोध परेको बताइएको छ ।
यस अघिको छैठौं कार्यसमितिको पदाधिकारीबाट भएको भनिएको आवेदनको विस्तृत विवरण प्राप्त हुने बाकी छ । श्रोत अनुसार सो आवेदनमा निर्वाचन समिति समेत खारेज गर्न माग गरिएको छ ।
के होला आई सि सि को आवेदन ?
एन आर एन ए आई सि सि मा आवेदन पर्नु नया कुरा भने होईन । यस अघि पनि पटक पटक एन आर एन ए आई सि सि मा आवेदन परेको छ । तर आईसिसिले सके सम्म एन सी सी मै समाधान निकाल्नु पर्ने भन्दै खासै चासो दिने गरेको छैन ।
एन आर एन ए कोरियाको ईतिहास
एन आर एन ए कोरियाको विगत हेर्दा अहिले मात्र होईन । विगत देखि नै विवादित रहेको छ । गत अधिवेशनमा समेत आर्थिक हिसाव नमिलेर छानविन समिति समेत बनेको थियो तर त्यसको कुनै अन्तिम हिसास किताव सार्वजनिक भएन । त्यसो त विगतको कार्यसमितिकै कोषाध्यक्षबाट हिनामिना भएको भनिएको रकम को लागि पहिलेको कार्यसमितिबाट कागज समेत गरेर राखिएकोमा त्यो रकम प्राप्त भए नभएको सार्वजनिक रुपमा कुनै जानकारी अहिले सम्म आएको छैन । त्यो मात्र हैन त्यस अघिका एन आर एन ए कोरियाको धेरै कार्यसमितिहरु आर्थिक विवादबाट समेत मुक्त हुन सकेको छैन । विगतको किचलोकै निरन्तरताको रुपमा अहिलेका विवादहरु सामाजिक सञ्जालमा छताछुल्ल भएका छन । हिजो पदमा बस्दा र आधिकारिक जिम्मेवारी लिदा विधानको धज्जी उडाउनेहरु नै अहिले प्रकृयाको कुरा गर्नु चाहि आश्र्चय जनक विषय रहेको छ ।
कसरी आयो समानान्तर एन आर एन का कुरा ?
सबै विषयलाई हेर्ने आफ्नै दृष्टिकोण हरु हुन्छन मैले एक तरिकाले गरेको विश्लेषण अर्कोले अर्के थरि गर्न पनि पाउछ । तर अहिले चर्चामा आएको विषय समानान्तर एन आर एन पनि हो । हिजो संस्थाको जिम्मेवार पदमा बसेका विभिन्न रुपमा संस्थाको भूमिका निर्वाह गरेका हरुले पनि यस्तो विषय उठान गर्नु दुःखको कुरा हो । यसको लागि अहिले भएका विभिन्न प्रकृयाहरु जिम्मेवार हुन सक्छन तर पनि हिजो आफ्नो हातमा डाडु पन्यु हुदा गरेका गल्ती र कमजोरी विर्सेर अरुलाई मात्र सत्तोसराप गरेर सामाजिक संचालमा कुर्लेर मात्र समाज निर्माण हुदैन । सके सम्म आफू अनुकुल काम गर्ने नसकेपछि सदस्यता शुल्क नै फिर्ता जिम्मेवारी बाट भाग्न मिल्दैन । विगत देखिनै एन आर एन कोरियाले धेरै कमिकमजोरी गरेको छ । राम्रो आशा गर्दा गर्दै निरास मजदुर विधार्थीबाट यो निराशा आउनु एउटा पक्ष हो तर हिजो आफूले गरेको मनलाग्दी विर्सेर गर्ने विष बमन भने अर्को पक्ष पक्कै छ । समानान्तरको कुरा धामी झाक्रीले सर्वसाधारणलाई भुतको डर देखाए जस्तै हो ।
अहिलेको कार्यसमितिले गरेका कार्यहरु पनि कोरियाको जनसमुदायले मुल्यांकन गर्ने नै छ । तर पुरानो कार्यसमिति देखिको विवाद नयाँ बन्ने समितिमा जान दिनु हुदैन ।भलै प्रकृयागत तृटि भए होलान तर विधि विधान अनुसार अहिलेको निर्वाचन समितिले काम गर्न खोज्दैछ । हामी सबैले कोरियाको विधान, अहिलेको संसोधित आईसिसिको विधान,आईसिसिको निर्देशन अनुसार निर्वाचन समितिलाई काम गर्ने वातावरण बनाउनु पर्छ ।कमि कमजोरी सच्चाउन पहल गर्दै अहिलेको निर्वाचन समितिलाई सफलता पूर्वक काम गर्न दिन कोरियाको नेपाली समुदायले सहयोग गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । यसैमा कोरियाको नेपाली समाज र सम्पूर्ण नेपालीहरु र एन आर एन ए कोरियाको पनि संस्थागत भलाई हुनेछ ।
प्रकाशित मिति: आईतबार, साउन ३, २०७८, ०९:३०:००
बिहिबार, माघ १३, २०७८, ११:२९:०० नुवाकोट समाज दक्षिण कोरियाद्वारा एम्बुलेन्स हस्तान्तरण
बुधबार, माघ १२, २०७८, १७:३०:०० एनआरएनए:उच्चस्तरीय समितिले फेब्रुअरी ५ भित्र डेलिगेट्स सूची तयार गर्ने
बुधबार, माघ १२, २०७८, ०९:५८:०० अध्यात्म?
सोमबार, माघ १०, २०७८, १७:४३:०० प्रवासी नेपालीहरूले मतदान गर्न पाउनुपर्ने अधिकारको लागि प्रवासी नेपाली मञ्चले ज्ञापनपत्र बुझायो
आईतबार, माघ २, २०७८, ०८:१३:०० हुन्डी विरुद्द आक्रामक बन्दै राष्ट्र बैंक,हुन्डीको स्रोत खोजिदै !
शनिबार, माघ १, २०७८, १३:१३:०० कोरिया लगायत विभिन्न देशमा भएका चार्टर्ड फ्लाईटको छानविन गर्छु - मन्त्री आले
हुन्डी विरुद्द आक्रामक बन्दै राष्ट्र बैंक,हुन्डीको स्रोत खोजिदै !
कोरिया लगायत विभिन्न देशमा भएका चार्टर्ड फ्लाईटको छानविन गर्छु - मन्त्री आले
कोरियाको राष्ट्रपतीय चुनाव अभियामा नेपालीहरु पनि संलग्न हुँदै
कोरियाले शुक्रबारदेखि कोभिड–१९ को खाने चक्की प्रयोग गर्ने
कृषि मन्त्री यादवलाई लखेटेको समाचार भ्रामक- जिल्ला अध्यक्ष राई
विदेशी मुद्रामा नेपालमा खाता खोल्दा राष्ट्रमा लगानी र रोजगारी बढ्ने-अर्थमन्त्री शर्मा
डेलिगेट्स विवाद सुल्झाउन कुनै सहमति भएको छैन: आचार्य
जिएमइ रेमिट्यान्सले नयाँवर्षकाे अवसरमा नि:शुल्क सेवा प्रदान गर्दै Naya Dainiki Author
सेयर बजारमा सेवा सुविधामा अब्बल बन्दै सुमेरु सेक्युरेटिज Naya Dainiki Author
कोरियाको दोङदेमुनमा नेपाली चेलीले खोलिन् पहिलाे हेयर ब्युटीपार्लर Naya Dainiki Author
के बिहे अनिवार्य हो?
के बिहे अनिवार्य हो ?
के दासतामा रमाउन सक्छ?